Kurarama kwekunamata kweAfrica zuva nezuva - Afrikhepri Fondation
Kurarama muAfrica mune zvekunamata muupenyu hwezuva nezuva
Kutsvaga uye kutsvaga kubatana kwemukati, kugara kwakabatana kune vamwe uye kune zvakasikwa, izvi ndizvo izvo vanhu veMaasai vanotikoka kuti tiite. Anthropologist Xavier Péron anotiratidza nzira iyi yehupenyu mubhuku rake razvino, zvakare bhuku rekuvandudza munhu. Kune avo, isu tinoziva chete refu yavo silhouette neine inozvikudza port inodzvanywa mune tsvuku. VaMasai, vanhu vevafudzi uye varwi, mapikicha anowedzerwa muUto hweAfrica kana zvinyorwa muKenya. Zvatisingazive, kusvikira ibasa reanthropologist Xavier Péron, nderekuti dzinotapurwa kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa zvine hupfumi hwomweya, hwairarama zuva nezuva, hwehukuru hwese uye unoona munhu se mubatsiri wezvese zvakasikwa .. Kune veMasai, nezveNative American yemweya kana Taoism, munhu ari pamusoro pechimwe chinhu chakabatana. Kune vamwe, kune kwaanogara uye kwesimba rehungwaru rinomupfuura uye ivo pachavo zvavanodaidza Enk'Ai, "mai mwarikadzi, sosi yehupenyu hwese, anotsanangura Xavier Péron. Zvinotora mativi akasiyana, nekuwonesa kuratidzwa kwawo, uye imwe neimwe iri muhukama uye munhu mumwe neayo, neminamato, zvinotamba, mifungo kunge zviito. ”Enk'Aï inotumira semuenzaniso mvura inonwisa mhuka nevarume , asi zvakare nemiedzo inovabvumidza kukura mumweya. Anthropologist akagara kwemakore navo, akatangwa mumitambo yavo, uye kwemakore makumi matatu, ave achitsvaga hukama hwakasimba hwemweya naKenny, shamwari yake uye Maasai gwara. “Naiwo, anotsidza, hapana huchenjeri hwechitendero kana dzidziso; vanorarama chaiko nekuve nazvo, asi vachiziva izvo zvavanofanirwa kuunza sevanhu uye nhengo dzenharaunda kuti dzirambe dzichienderana uye dzakapindana muhupenyu hwakawanda ”. Maererano naye, kwavo kwekunamata kunogona kushandurwa neiyi mitsara yekumanikidza: kukunda kutya kwavo, kugara kwakabatana, kusakuumba kupatsanurwa mukati mavo uye kwakavakomberedza, vachishandisa mukana wemiedzo, vachisangana nei. “Izvi ndizvo zvandinoyedza kuita zuva nezuva uye zvakachinja hupenyu hwangu, ndosaka ndichifunga sekunge munhu anofamba nemhiri kuWest. Kune avo vakaparadzaniswa, vakaparadzirwa, vakagumbuka varume tava, zvinoita sezvakakosha kwandiri kutambanudza iwo mharidzo yekudana kubatana remukati, kusvika pakuvhurwa kwekusaziva, maviri mafessents akakosha ezve mumwe akangwara uye vanhu ". Iri izwi iri rataida kuti rinzwiwe. Kwete kukoshesa tsika kana nzira yehupenyu, asi kuti itipe simba uye itikurudzire isu. Nekuwana mbiru shanu dzeMaasai pamweya.
ILMAO: Kubvuma kuwirirana
Izwi rekuti "Maasai" rinobva pashoko rekuti ilmao ("mapatya"), iro rinoratidza dzidziso yekuti zvinhu zvese zvakabatana nevamwe kuti zviite mapepa ezvekuenderana. Sezvo mune tao neayo mufananidzo weYin uye Yang, vanopesana varipo, asi havasi vanopikisa. Hutongi hunobata ushe kunze, senge masikati neusiku, mvura nekusanaya; uye nechomukati mako, apo zvirevo zvevavhiringidziri uye vezvemagetsi zvinowira pasi, kutya uye kushinga ... Kuramba ndizvo, kune Massaïs, ndiyo nzira yakanaka yekutambura uye kupokana nevamwe. Nekudaro kugamuchirwa kwakakodzera kwehukama hwapasi uye hwevanhu.Chimiro chinosimudzira moyo murefu nekunaka. = Dzidzira: Kuziva mapatya ako emukati.Rongedza hunhu hwako uye gadzirisa chimwe nechimwe chazvo urema. uye maitiro anogona kunge akatungamira kukundikana kana kukakavara. Muenzaniso: "nerupo" runogona kuwirirana ne "kusapindirana", rupo runogonawo kuve tarisiro yekudzokorora uye kuve chisakiso chekusawirirana kana zvichinge zvaramba zvakadaro. Chinangwa ndechekukanda iwe pachako uye nevamwe kukanganwira. Batanidza mazwi ako uye zviitiko zvako kuti udzivise dissonance uye nevanopokana, zvinyorwa zvekukanganisika kwevanhu uye hukama. Mabasa uye mazwi anofanira kunge ari mapatya. Hapana mutsauko pakati pekuzvitaura uye kuzviita pakati pevanhu veMaasai, vanoziva kubva mune zvakaitika kuti kusawirirana uku ndiko kuvimbisa hukama hwakanaka uye hunogara.
ENCIPAI: Kuti uve mufaro
Kune VaMasai, mufaro hachisi chinangwa asi pekutanga. Iko kuratidzwa kwechisungo chipenyu chinovabatanidza kuna mai mwarikadzi, sosi yehupenyu hwese. Kuonga kunopa mufaro, uko kunosimbisa kunzwa kwekutenda. Kutenda kuve mupenyu, kukwanisa kuzviraramisa, kugona kugovera miedzo pamwe nemafaro ... Kugovana uye kufara pamwe chete, kuratidza zviri kufamba zvakanaka, kuratidza kuseka zviitiko zvese zvinoita kuti mufaro urambe uchiripo zuva nezuva kurarama. Kuva nemafaro zvakarewo maitiro ekuremekedza isu kune vamwe, kunopa nyaradzo yehukama kubva kunobatsirwa munhu wese. Kunze kwezvo, ivo vanhu vechiMaasai vanoshandiswa kuzivisa nhau dzakaipa ne "kuuchata" pakati pezvakanaka. Kuumbwa uku kunoisa bharamu mumwoyo yeavo vanoigamuchira uye kurerutsa mutoro wevanoripfuura.Printa: Ita kuvonga zuva nezuva, kutanga nekuziva zvipo, zvisinei nekuti zvidiki zvaungave, zvaunogamuchira. Musuwo watinokubata, kunyemwerera kwatinotaura kwauri, chikafu chaunogovana ... Ipa mukana wako, muhana, nguva, kurumbidza, kuraira, izvi zvese zvidiki zvinopfavisa uye zvinosimbisa mazuva evaya vakakukomberedza .. Zviise pachako neku "kuvharira" pfungwa isina kunaka kana chokwadi pakati pezvakanaka zviviri pfungwa kana chokwadi, sezvinoita Maasai. Batanidza pamwe nesimba rezvisikwa. Izvi ndizvo zvinoita kuti tinzwe kubatana muhukuru hwehupenyu. Hapana chakafanana nekutsamira pamuti uye kurasikirwa nekutarisa mumashizha awo kusvikira iwe uchinzwa imwe nawo kuti uwane kugadzikana uye simba remukati. Zvinhu zviviri zvekufara.
OSINA KISHON: Kugashira "chipo-yekutambura"
Pasina kutambudzika, hapana kumutsa. Uku ndiko kudzikiswa kwakadzama kwevanhu veMaasai, vanoona mumiedzo yakatumirwa naEnk'A opportunity mukana wekukura. Chimwe chezvirevo zvavo zvinoera zvinopupurira izvi: "Nyama isiri kurwadziwa hainzwi chero chinhu." Mune maonero aya, vanotenda amai mwarikadzi nekuisa mukana wekutongwa munzira yavo. Tsika yavo pamwe chete inozove mu "kurodza mwoyo wemunhu" nekugadzira mapfundo masere (anomiririra muyedzo) patambo (moyo), iwo wavachasunungura (chiratidzo chekugadzirisa), zvichiratidza kuti, zvekare, zvese yakavakirwa uye kuti iwe unogona kungosunungura dambudziko nekuziva seyako wobva watarisana nekunetseka kuigadzirisa. Maitiro: Ramba uchiita seMasai, vanoona zvavo moyo (kutya, kusuwa, kutsamwa, kushaya simba, shungu dzekutsiva ...) mushure mekusangana kwetambo, uye vatakure kumoyo kuti uvapise uye uvashandure kuve hupenyu hwehupenyu, senge alchemist uyo, mune yake athanor, anoshandura lead kuva goridhe. Wobva wabvunza bvunzo dzako sevaMasai vanotaura pabvunzo seshamwari. Chii chaunoda kundiudza Chii chandinofanira kuita? Ndinofanira kumirira kana kuita chimwe chinhu? Inzira ipi yandinofanira kutora? Nyora pasi mhinduro dzese dzinouya kwauri pasina zvadzinoreva kana kuvatonga.
EUNOTO: Kuva murairi
Kumashure emuvaki, Masai anofarira iwo wevanodyara. Nepo yekutanga ichingotarisa chete mukuzadzisa chinhu chaakazvigadzirira iye, kuvaka, chechipiri chinodyara muti wake, ndokuuporesa, asi anobvuma kuita neizvo zvinomupukunyuka (chiyero chekukura, iyo vagaries yemamiriro ekunze ...). Sezvineiwo, kuve wekudyara ndeyekuti uve muchikamu pamwe neazvino nguva, kuzvichinjisa uye kuzvichengetedza uri munzvimbo pakati pekukasira uye kuvimba, kuda uye kuzvininipisa. Uku kuchinjika kuri chikonzero chekudzikama, moyo murefu uye kunodzivirira kubva pakutsamwa nekuodza moyo. Kudzidzira: Zvikomberedze, semuti, munguva iripo. VaMasai vanoti "zvakapfuura inyika yandisingagare." Pano uye ikozvino unonzwa sei? Ungaita sei zvakanakira mamiriro ezvinhu nevanhu varipo? Iwe unofunga kuti chii chisina kukodzera uye chinoremerwa kubva kare? Chii chinofungidzira kufungidzira chinokutadzisa kubva kuravira zvazvino? Dyara muti, chengetedza chirimwa. Izvi zvinokuita kuti uise bhatani rekuti "ndinoda" padivi kwenguva pfupi uye ndokubatsira kuti uite chaizvo.
AINGORU ENKITOO: Tsvaga kurongeka kwakarurama
Kuve wakarurama - mumashoko ake, zviito zvake - zvinoreva kuti Masai abatanidzwe Enk'Aï. Chirevo chinoratidza "kuve nekutaura kwakajeka uye nzira yekuzivisa". Iyo kujekesa kwekutarisa kuchiratidza kuti kubatana kwemukati kunoonekwa kunze, uye nzira yekusvinura inopupurira kune manzwiro ekujeka uye chengetedzo nekuda kwechokwadi chekufamba munzira yakanaka. Dambudziko, kukakavara, kusagadzikana, kune rumwe rutivi, zviratidzo izvo kuti munhu arasisa uye kuti mumwe atama kubva kune "mishoni" Nekuti, Maasai, kunge uri kutsvaga kurongeka kwakanaka zvakare kutsvaga pane zvatauya kuzoita pasi pano. Dzidzira: Teerera kune ako muviri meseji kana waita sarudzo, waita sarudzo. Kana ivo vakarurama, pasi pekunze manzwiro (kutya, kufara), iwe unofanirwa kunzwa kudzikama, kunzwa rugare rwemukati, uko kunogona kushandurwa kuve mazwi ne "hazvisi nyore asi zvinongo" . Kune rimwe divi, zvibvunze kana iwe uchinzwa kusasimba, kusagadzikana, kusagadzikana kwepfungwa uye kwemuviri, uye kuti izvi zvinzwa zvinopera kana kuratidza nguva imwe neimwe yaunofunga nezve yako sarudzo kana yako sarudzo.
NaFlavia Mazelin Salvi
Kubva mumagazini inonzi magazini psychologie yaFebruary 2014
Nhoroondo Yechokwadi Yevatema Vakavanzika nevaWestern
Tarisa Lincoln (2012)
Mwoyo, ine simba jenareta yemagetsi emagetsi anotidzivirira